Tag: mawduuca wordpress | Martech Zone
Tag: mawduuca wordpress
Muddo toban sano ah, shaqsiyan waxaan horumarinayay caado iyo daabacaadda daabacaadda, sixitaanka iyo naqshadeynta mowduucyada gaarka ah, iyo u habeynta WordPress macaamiisha. Waxay ahayd wax duuban oo waxaan hayaa fikrado aad iyo aad u adag oo ku saabsan hirgelinta aan u qabtay shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryar. Waxaan sidoo kale dhaleeceeyay kuwa wax dhisa - plugins iyo mawduucyada u suurta geliya wax ka beddelka aan xadidnayn ee goobaha. Iyagu waa khiyaamo, badiyaa waxay si ballaadhan u kordhineysaa cabirka bogagga mareegaha intay gaabinayaan
Waxay ahayd hal sano oo keliya tan iyo markii ugu dambeysay ee aan maqaarka ku shubo bartayada 'WordPress'. Intii aan jeclaa qaabka, waxaan haystay tanno ah fiilooyin iyo habeyn si aan uga dhigo inay u shaqeyso sidii aan doonayay, sidoo kale. Iyadoo la adeegsanayo WordPress, taasi waxay bilaabi kartaa inay higgaadiso masiibo marka loo eego waxqabadka waxaanan arkayay dildilaaca aasaaska. Marka, waxaan ugaarsi ugu jiray naqshad isku dari kara labadaba bandhigyo aad u waaweyn iyo sidoo kale
Baahida loo qabo horumarinta WordPress ayaa sii socota oo sii kordheysa iyadoo ku dhowaad dhammaan macaamiisheenna ay hadda haystaan ​​ama ay leeyihiin bog WordPress ah ama ay ku jiraan galka WordPress. Waa tallaabo adag - oo uusan jeclayn qof walba laakiin waxaa jira mowduucyo aad u tiro badan, waxyaabo dheeri ah, iyo tiro badan oo horumariyayaal ah oo macno samaynaya. Awoodda aad wax uga beddeli karto joogitaanka websaydhka adiga oo aan xoqin madal oo aad bilowdo waa faa'iido weyn. Hadaad waligaa qabto
Waxaan raadinayey plugin ama koodh aan ku kala beddelo cinwaannada cinwaankeenna boggayaga at DK New Media inaad ku raaxaysatid oo aad u labisato bogga guriga xoogaa. Dhibaatadu waxay ahayd inaan haysto mawduuc la dalbaday oo leh goobo gaar ah oo loogu talagalay khadka tagta iyo sharraxaadda goobta, mana aanan dareemin inaan u kala jeexjeexay wax ka beddelkan. Si tan loogu sameeyo plugins iyo wax ka beddelka mawduuca ayaa u baahan doona